Drop Wire Ngocingo H15
Beka ngocingo H15 wenziwe UV polymer ukumelana lashukumisa steel hook.
Okunye-optical fibre iconsi wire izibopho kukhona kalula ukuba sithathe ngokuvumelana ukumelana mechanical ububanzi wire izintambo 'gijimi. Beka wire okubambelela izibopho ingafakwa efile ekupheleni, kabili efile-ophela inethiwekhi yentambo imizila. Fibre optic iconsi ikhebula izibopho design ivumela ukumelana umthwalo esanele ngaphandle ikhebula ukushelela kanye umonakalo.
Zonke yesifunda wadlula ukuhlolwa eqine, operation isipiliyoni okushisa ezisukela - 30 ° C kuze kube +50 ° C test, izinga lokushisa ngebhayisikili test, ukuguga test, ukugqwala ukumelana yokuhlola njll
Previous: ACCC, ACSR Twin phezulu uthayi LJS
Olandelayo: Turnbuckle T-30-01
Ihange ngocingo H15
FTTH ikhebula nokufakwa
FTTH ngocingo H15